Moya I-China i-Swab ye-Cotton eLahliweyo , i-Biodegardable Eco-friendly kunye ne-bamboo stick factory kunye nabanikezeli |Zhongxing
Amathupha eCotton Bud ...
I-Cotton Swab elahlayo, i-Biodegardable Eco-friendly kunye nentonga ye-bamboo
SHAOHU @ Cotton Swab ibonelela ngezinto ezahlukeneyo onokukhetha kuzo intonga yomthi, intonga ye-bamboo, intonga yephepha, intonga yeplastiki njalo njalo. Izinti zeBamboo zezona zinto zincomekayo ezivuselelekayo kuba zikhula ngokukhawuleza kangangokuba zinokuvunwa ngendlela ezinzileyo. Kwaye ziyakwazi ukubola kwaye zinokuphathwa ngenkathalo. Izinto esizixhasayo.Intonga yephepha ibhetyebhetye ngakumbi, ayinakwaphuka, ikhuselekile ukuyisebenzisa, kwaye iyabola, izenza isixhobo esikhulu sococeko lomntu. iimfuno.
I-SHAOHU @ I-cotton swabs iza kwizinto ezahlukeneyo kunye nobukhulu bepakethe, kwaye ingasetyenziselwa kuphela imisebenzi yokucoca i-daliy, ukunakekelwa kobuhle, ubugcisa, kunye nokunyamekela izilwanyana. zivumele wena kunye nabantwana ukuba uzisebenzise njengeebrashi zokulinganisa kwimisebenzi eyonwabisayo ukupeyinta ikamva eliqaqambileyo nathi.
1.Izinto eziphathekayo: I-bamboo, ukhuni, iPhepha, intonga yePlastiki + incam yomqhaphu
2. Intonga: Ubude-75mm(Ukunyamezela 2cm Ubunzima-22g-24g
3.Tip Weight(100% Bleached Cotton ) : ≥35mg
4.Amandla okuncamathelisa abetwwen intonga anf tip : Hayi ngaphantsi kwe 4.0N
5.Ixesha lokutshona :Lingabi ngaphezu kwe-10s
6.Ukupakisha:100% ukupakisha eco-friendly
FOB Ixabiso:US $ 0.02 - 0.03 / Iqhekeza
Ukubonelela ngeSakhono:1000000 Iqhekeza/Amaqhekeza ngenyanga
Ngaphezulu kweminyaka eli-10 yophuhliso, iqela leZHONGXING ligxile ekuveliseni nasekuthumeleni kumazwe angaphandle uthotho lweemveliso zeCotton Swabs.
IiSwabs zoMqhaphu eziLahliweyo
Umqhaphu Swabs---100pcs okanye 200pcs ibhokisi biodgradable
ISAMPULI YAMAHHALA!!IINDLELA EZIMBINI ZOKUYIFUMANA.
1.Cofa ithebhu ethi "cela isampuli yasimahla".
2.Qhagamshelana nathi nge-imeyile
Iisampulu ziya kuthunyelwa ngokwesicelo sakho (isenokungafani nalapha ngasentla), iindleko zekhuriya zithathwa kwicala lakho.
I-SHAOHU @ i-cotton swab ibonelela ngeendlela ezahlukeneyo zezinto eziphathekayo, intonga yomthi, intonga ye-bamboo, intonga yephepha, intonga yeplastiki kunye nokunye.Ikhuselekile ukuba ingasetyenziswa kwaye inokonakala ngaphandle kokubangela ungcoliseko kwendalo.Izinti zoqalo zezona zinto zibalaseleyo ezihlaziyekayo kuba zikhula ngokukhawuleza kangangokuba zinokuvunwa ngendlela ezinzileyo. Kwaye ziyakwazi ukubola kwaye zinokuphathwa ngokufanelekileyo. Zezinye zezona mveliso zisebenzayo zokucoca kwendalo, kwaye zizixhobo esizithethelelayo.Iintonga zephepha zibhetyebhetye, azinakwaphuka, zikhuselekile ukusebenzisa, kwaye ziyabola, zizenza isixhobo esikhulu sococeko lomntu.Intonga yePlastiki ibhetyebhetye kakhulu. kwaye inokubunjwa kakuhle kakhulu, kwaye inokuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo zabantu.
I-SHAOHU @ i-cotton swabs iza kwizinto ezahlukeneyo kunye nobukhulu bepakethe, kwaye ingasetyenziselwa kuphela imisebenzi yokucoca imihla ngemihla, ukunakekelwa kobuhle, ubugcisa, kunye nokunyamekela kwezilwanyana. kwakhona zivumele wena kunye nabantwana ukuba uzisebenzise njengeebhrashi ezincinci kwimisebenzi emnandi yokupeyinta ikamva eliqaqambileyo kunye nathi.
ISILUMKISO NGOKHUSELEKOAmaqhuma womqhaphu akufanele afakwe nzulu kwindlebe engaphakathi okanye impumlo.Gcina ngaphandle kokufikelela kubantwana.Ukusetyenziswa ngokungafanelekanga kunokubangela ukwenzakala.
I-Cotton Swabs yeGauze yoMqhaphu, iBhola yomqhaphu, iMask yoBuso, iPhepha loNyango, iMeidcal Cap njl.
Inye okanye Kabini intloko engqukuva
Intonga yoqalo, umqhaphu
Umgangatho ophezulu woMqhaphu weSwab
200pcs / ibhokisi, 100pcs / ibhokisi
(Nikeza ngeentlobo ezahlukeneyo zokukhetha ukupakisha, ngokweemfuno zabathengi.)
75.0 ( ±1.0 mm)
15.0 ( ±2.0 mm)
ø 5.0 ( ±0.3mm)
>= 1.5 mm
ø 2.5 ( ±0.16 mm) x 70 mm ( ±0.8 mm)
Ngaphambili: Ibhola yomqhaphu eLahliweyo ye-100% ye-Cotton ecocekileyo.
Okulandelayo: Imaski yesihluzo esizifunxayo esizifunxayo
I-Biodegradable Cotton Swab
Mask Njengobuso, 3 Gcoba iMaski yoBuso eLahliweyo, Ffp1 Imaski elahlayo, Iimaski ezi-3 eziLahlwayo ngeFda, Ukulahlwa kweHalf Mask Respirator, Umsebenzi Wemaski,